Shirkan Xamar ka socdaa waa kii Labaad ee maaha “Markii ugu Horreysay” | SMC
Home WARARKA MAANTA Shirkan Xamar ka socdaa waa kii Labaad ee maaha “Markii ugu Horreysay”
Shirkan Xamar ka socdaa waa kii Labaad ee maaha “Markii ugu Horreysay”
Runtii waa wax laga naxo marka shakhsiyaad sifa kasta oo xun ay u sugnaatay ay ku hogaamiyaan, waana dhibaatada ku dhacday Dalkanaga. Beenta, Gaboodfalka, Awood sheegashada, Baalmarka sharciyada awlaba iks liitay iyo ka nixid la’anta shacbiga waa habdhaqan faan ka ah madaxda dowladdaan.
Bal aynu eegno Beenta oo kaliya: qofka bani-aadamka ahi beenta waa ka xaraan qofka muslimka ahina kuma sii jiro. Waa ka rabbi quraanka karimka ah uu ku nacladay. Iyadoo waliba ay saameyn badan tahay marka uu mas’uul yahay diini an aha maamul ah ama hogaamin. Waayo waxaa ku dayana inta kale, waxana soo bxaya koox weyn oo wada beenayaal ah. Cidkasta oo dowladda ka mid ah waxay si farxad leh ugu faantaa beenta. Marka la soo bilaabo madaxweyne ilaa wariyaha Radiyaha iyo Telifishanka dowladda u shaqeeya.
Haddaba dowladda Federaalka waxay mar waliba si aan xishood lahayn u sheegtaa in wax waliba ay yihiin markii ugu horreysay, sidii ay meyto ahaayeen markii dhacdooyinkan ay dhacayeen.
Shirkan Xamar shalay iyo maanta ka socdaa waxay dowladdu ku sheegtay inuu yahay kii ugu horreeyey ee nuuciisa ah oo Xamar lagu qabto. Waa been cad oo marin habaabin ah oo ay dowladdu isticmaashay. Waxaa Xamar lagu qabtay shirkii ku xigay Copenhegan 2015. Halkaan muqaal iyo codba kaga bogo iyadoo waliba amaan weyn loo soo jeedinayo xukuumaddii markaas jirtay ee MW Xadan sheekh, halka shalay u dhaliil weyn u soo jeediyeen hogaan xumada dowladdaa madaxdii timid.
Dowladda Somaliya oo marwaliba ay caado u tahay inay been ku nooshahay ayaa idaacadda qaranka ee Radiyo Muqdisho ku qoray boggeeda “Shirka oo markii hore lagu qaban jiray dalka dibaddiisa, ayaa loo soo raray Soomaaliya oo hadda soo gaartay heer ay marti gelin karto shirarka heerkoodu sarreeyo amni ahaan, dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba.”
Runtii waa wax laga naxo inay dowladaan aysan dalkaan ka warqabin wixii dhacay si aan loogu noqon dhibaatadii. Ma oga in wixii la soo qabtay iyo meel ay wax joogaan oo wax waliba eber ayaa laga soo bilaabaa.
Marka waa arrin aan dowladi ku jirin waana sababta burburka keeneysa. Mar waliba waxaan maqallaa iyadoo madaxda iyo mas’uuliyiinta hoose oo leh waa markii ugu horreysay oo waxaan la qabto.
Previous articleDaawo Sodhaweyn loosamayey Suldaan xeydar suldan suufi suldan beesha tunni
Next articleXAAF oo arrin aysan fileyn dowladda ka sheegay shirka Madasha Iskaashiga Somalia